फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफामा सामान्य सुधार, अन्य सूचक कस्तो ?
बैंक खबर । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भन्दा नाफामा सामान्य बृद्धि भएको छ । चैथो त्रैमास सम्ममा लघुवित्तले १४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा लघुवित्तले १३ करोड ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १८.१० प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा ३.२९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै खराब कर्जा असुलीमा लघुवित्त सफल देखिन्छ । यो अवधिमा लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा शुन्य प्रतिशत कायम भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै लघुवित्तले २६ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हो । लघुवित्तले २९ करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
८७ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तले ८ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ सापटी (बरोइङस्) गरी ८ अर्ब २० करोड ४१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो अवधिमा लघुवित्तको जगेडा कोषमा २८ करोड १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सञ्चित देखिएको छ ।
लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ १४ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात ५०.९९ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ३१ रुपैयाँ ९५पैसा रहेको छ ।
'मेगा बैंक १२औं बर्षमा प्रवेश, आगामी ५ बर्षका लागि रणनीतिक योजना तयार '
'फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफामा सामान्य सुधार, अन्य सूचक कस्तो ? '
'कामना सेवा विकास बैंकको खुद नाफामा आकर्षक वृद्धि, ईपीएस कति ?'